I-Microcement: into efunwa kakhulu kwihlabathi lohlaziyo | Bezzia
IBezzia | 19/06/2022 08:48 | Ukuhonjiswa, Ukuhombisa amaqhinga
El ikhaya liziko loxinzelelo lwentlalontle yethu, sisebenza ukuqinisekisa ukuba siphantsi komgangatho wobomi obufanelekileyo. Ukonyusa amaxabiso anje ngokuhlala, intuthuzelo okanye ubuhle, ukwenza uhlaziyo sesinye sezona zenzo zonelisayo. Umsebenzi esinokuwuphuhlisa ngokwethu ukuba sifundisisa ngononophelo iindlela ezahlukeneyo zokukhetha ezibalaseleyo kwimarike yangoku; njenge microcement. Isixhobo esithandwayo esiye sazinzisa njenge-axis kwi-DIY (yenza ngokwakho) ifilosofi.
1 Yintoni i-microcement kwaye ingafakwa phi?
2 Ziziphi iingenelo ze-microcement
Yintoni i-microcement kwaye ingafakwa phi?
Xa sithatha isigqibo sokwenza uhlaziyo kwigumbi elinye okanye aliqela endlu, kubalulekile ukwenza uhlalutyo lweemveliso ezahlukeneyo esinazo. Ngokwenza oko, kungekudala sizifumana sithe ngqo kunye ne into encinci: Isixhobo esenziwe kwisamente, i-resin, i-additives kunye nee-mineral pigments ezilungele ngokupheleleyo. Eli nqaku litshintsha yonke into kwihlabathi loyilo lwangaphakathi kwaye, ukuba sityala imali kwi-microcement elungele ukusetyenziswa, sinokuyisebenzisa ngokwethu. ukufikelela kwinqanaba elitsha lokugqwesa ukuhombisa.
Ngelixa ezinye izinto zisinyanzela ukuba sicinge ngeenkqubo zokwakha ezibiza imali eninzi, i-microcement ilandela i-DIY wave. Ngale ndlela, sinamandla oku senze uhlaziyo kwigumbi ngalinye lendlu ngaphandle kwemiba efana nemali okanye ixesha elibekwe kuthi. Ngaphezu koko, i-microcement iyasebenza kuzo zonke iintlobo zemigangatho, kuquka iithayile, iithayile kunye nebhodi yeplasterboard. Umsebenzi esiwufezayo ngeentsuku nje ezimbalwa ukuze sonwabele indawo entsha, enoyilo oluqhubekayo kwaye ilungelelaniswe nezinto esizithandayo.
Ukusetyenziswa kwe-microcement kuthandwa kakhulu kwiindawo zokuhlambela, ngenxa yokukwazi ukuphelisa amajoyina kwimigangatho kunye neendonga ukushiya ukubonakala kokuqhubeka. Nangona kunjalo, Nakuphi na ukuxhomekeka kwepropathi kwamkela imathiriyeli ngezandla ezishushu, njengekhitshi, igumbi lokulala, i-patio yangaphandle okanye igumbi lokuhlala. Konke oku kukwazi khetha ngokukhululeka ngokupheleleyo kokubini ithoni kunye nokuthungwa kwezintol. Ngamanye amazwi, enkosi kuluhlu olubanzi lwee-pigments ezivela kubavelisi abakhulu be-pigment, siya kuba nalo kanye uyilo ebesisoloko siphupha ngalo.
Ziziphi iingenelo ze-microcement
Nangona kuyinyani ukuba ukuguquguquka malunga nokusetyenziswa kwayo kunye nemibala esinokuthi siyikhethe sele sisizathu esaneleyo sokuthethelela lo mbandela, sifumana ezinye izizathu ezininzi esifanele sizihlalutye. Gcina ukhumbula ukuba ixabiso lale mveliso alitshiphu ncam ukuba sithelekisa nezinye iinketho; nangona kunjalo, ukwazi ukuba sigcina ekuqeshweni kweemashi, kucacile ukuba yenye yezona ndlela zingabizi kakhulu kwimarike. Kodwa imali ayisiyiyo kuphela inkxalabo kwiingqondo zethu ngexesha lokulungiswa, ngoko Makhe sibone izakhono ezininzi ze-microcement.
Eyokuqala yile ukuncamathela okumangalisayo ekubonisayo kuzo zonke iindidi zemigangatho, nokuba ithe nkqo okanye ithe tye okanye ngaphakathi okanye ngaphandle. Into engathathi ixesha elide ukuba isebenze, ngenxa yeempawu zayo zokumisa ngokukhawuleza. Ngokufanayo, kufanelekile ukukhankanya isalathiso sayo esiphakamileyo sokuxhathisa, siyakwazi ukumelana ne-abrasion, imikrwelo kunye nemivumbo Njengezinye izixhobo ezimbalwa. Ngokuphathelele ukugcinwa kwayo, I-microcement ilula kakhulu ukuyicoca: kuphela amanzi kunye nesepha engathathi hlangothi efunekayo. Iingenelo ezahlukeneyo ezithi, kunye nokhathalelo lokusingqongileyo olubandakanya ukusetyenziswa kwayo, zikhuthaza abantu abaninzi ukuba bayisebenzise emakhayeni abo.
Ke, ngoku ekubeni usazi yonke into imicrocement enokukwenzela yona, lixesha lokuba ufunde zeziphi ezona venkile zingcono zotyalo mali kulo mbandela. Ewe kunjalo, lutshintsho lwekhaya lakho oluya kukwenza ukuba wonwabe yonke imihla ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ukuhombisa amaqhinga » I-Microcement: yimathiriyeli efunwa kakhulu kwihlabathi lohlaziyo